विकास आयोजनाको प्रगति विवरण संकलनमा प्रदेशसभाको संसदीय समिति – Maitri News
विकास आयोजनाको प्रगति विवरण संकलनमा प्रदेशसभाको संसदीय समिति
काठमाडौं । प्रदेश ३ को अर्थ तथा विकास समिति अहिले विभिन्न प्रदेश मातहत सञ्चालित विकास आयोजनामा भएको प्रगति विवरण संकलनका लागि खटेको छ ।
प्रदेश ३ को अर्थ तथा विकास समितिले योजना अनुगमन उपसमिति नै गठन गरेर अनुगमनका लागि टोली खटाएको हो । सो टोली अहिले विभिन्न जिल्लाको अनुगमनमा खटिएको छ । पहिलो चरणमा धादिङ, नुवाकोट र रसुवाको अनुगमन गर्ने गरी टोली अहिले ती जिल्लामा पुगेको छ ।
उपसमितिका संयोजक नारायण सिलवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार मात्रै धादिङ जिल्लामा निर्माणाधीन चार योजनाको अनुगमन गरेको समितिका सदस्य डा. अजय क्रान्ति शाक्यले जानकारी दिनुभयो । टोलीले धादिङबेसीस्थित विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो । डा.शाक्यकाअनुसार धादिङमा २ करोड ५७लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन धोपलखोला पुल, २८ करोड लागतमा धादिङबेसी–सङ्कोस–पिप्लिङ सडक र ६० लाखको लागतमा बन्दै गरेको निलकण्ठ–१३ को सडक योजनाको अनुगमन गरेको थियो ।
धादिङबेसी–सङ्कोस–पिप्लिङ सडक हालै मात्र प्रदेश मातहत आएको हो । यो सडक चाइना जोड्ने सडक पनि हो । अनुगमनका क्रममा संसदीय टोलीले कुनै पनि बहानामा निर्माण कार्यलाई नअल्झाउन वा ढिला नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सो टोलीले आज र भोलि नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमन गर्ने डा.शाक्यले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन टोलीमा प्रदेश सांसदहरु डा. अजय क्रान्ति शाक्य, बिजुला बर्मा, शोभा शाक्य, आशामाया तामाङलगायत हुनुहुन्छ ।
Previous Previous post: स्वीडेनमाथि स्पेनको सहज जित
Next Next post: प्रधानमन्त्री ओली र बेलायती समकक्षी मेबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता